အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Buts/Chance/Cheer/Day/Fool) - Myanmar Network
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Buts/Chance/Cheer/Day/Fool)
Posted by Language Republic on December 22, 2011 at 10:23 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
No buts about it (မငြင်းပါနဲ့ ၊ စောဒက မတက်ပါနဲ့)
You say no buts about it when you are determined that something will happen and do not wish to hear any disagreement or argument about it:
မငြင်းပါနဲ့ (no buts about it) ကို တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမည့်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက် ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောမတူညီမှု (သို့) အငြင်းပွားမှုတို့ကို နောက်ထပ်မကြားလိုသည့်အခါတွင်သုံးသည်။
'It's very generous of you to offer to lend me the money, but I cannot possibly accept it'
ငါ့ကို ပိုက်ဆံချေးဖို့ကမ်းလှမ်းတဲ့အတွက် မင်းဟာအလွန်ရက်ရောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါလက်မခံနိုင်ပါဘူး
'No buts about it. I can afford it and you can pay me back when you getajob.'
မငြင်းပါနဲ့၊ ငါဒီလောက်တော့တတ်နိုင်ပါတယ်။ မင်းလည်းအလုပ်ရရင် ငါ့ကိုပြန်ဆပ်ပေါ့။
I don't care if you promised to go out with your friends tonight. You're going to stay in and do your homework and there will be no buts about it.
မင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်ထွက်လည်ဖို့ကတိပေးထားတာတွေကို ငါဂရုမစိုက်ဘုး။ မင်းအိမ်ထဲမှာပဲနေရမယ် ပြီးတော့ မင်းအိမ်စာလုပ်ရမယ်။ ဒါကို မင်း စောဒကမတက်ပါနဲ့။
No chance! (ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး)
You use no chance! in this way when you think that there is no possibility of something happening:
ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး (no chance!) ကို တစ်စုံတစ်ရာသည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ချေမရှိဟု ထင်မှတ်သည့်အခါမျိုးတွင် အသုံးပြုပါသည်။
I suppose your dad might give you the money forataxi.'
မင်းကိုမင်းအဖေက တက္ကစီခ ပေးမယ်ထင်တယ်။
'No chance! He told me yesterday that I was to stop spending so much money.'
ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ မနေ့က သူငါ့ကို ပိုက်ဆံတွေအများကြီး ဖြုန်းတာ ရပ်တော့လို့ပြောခဲ့တယ်။
There might still be some tickets left for the concert. We could phone the box office.'
ဒီဖျော်ဖြေပွဲအတွက် လက်မှတ်အချို့တော့ ကျန်ဦးမယ်ထင်တယ်။ ငါတို့လက်မှတ်ရုံကို ဖုန်းဆက်ကြည့်သင့်တယ်။
'No chance! They were all sold out the day they went on sale.'
ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ စရောင်းတဲ့နေ့မှာတင် အကုန်ရောင်းထွက်သွားတယ်။
Cheer up! (စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့)
You say cheer up! to someone who is sad or depressed when you want them to be more cheerful or optimistic:
စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့ (cheer up!) ကို ၀မ်းနည်းနေ (သို့) စိတ်ဓါတ်ကျနေသူ တစ်စုံတစ်ယောက်အား ပိုမို တက်ကြွလာစေလိုသည့်အခါ (သို့) အကောင်းမြင်စေလိုသည့်အခါတွင်သုံးသည်။
Cheer up! I know you didn't get the flat you wanted, but there are plenty of other flats for sale in that area.
စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့။ မင်းလိုချင်တဲ့ တိုက်ခန်းမရလိုက်မှန်းငါသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီရပ်ကွက်မှာ အခြားရောင်းမယ့် တိုက်ခန်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
Cheer up! Your fiancé hasn't gone away forever. He will be back next month.
စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့။ နင်နဲ့စေ့စပ်ထားတဲ့သူက အဝေးကို တစ်သက်လုံးထွက်သွားတာမှမဟုတ်တာ။ နောက်လဆို သူပြန်ရောက်ပါပြီ။
It wasn't my day (ဒီနေ့က ပြဿဒါးနေ့ပဲ)
You say it wasn't my day ofaday when several things go wrong and you are not at all successful:
အဲ့ဒီနေ့က ပြဿဒါးပဲ (it wasn't my day) ကို အရာရာမှားယွင်းနေပြီး သင်လည်း ကိစ္စအများစုတွင် မအောင်မြင်သည့်နေ့တစ်နေ့ကို ပြောလိုသည့်အခါတွင် သုံးသည်။
I hoped to win the tennis tournament but it wasn't my day. I forgot to bring my favourite racquet, I injured my shoulder in the first game and my opponent played much better than he usually does.
ဒီတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲကို နိုင်မယ်လို့မှန်းထားတာ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီနေ့ကပြဿဒါးပဲ။ ငါ့အကြိုက်ဆုံး ရက်ကက်ကို ယူလာခဲ့ဖို့ မေ့သွားတယ်။ ငါ့ပုခုံးလည်း စစချင်းပွဲမှာတင် ဒဏ်ရာရသွားတယ်။ ပြီးတော့ငါ့ပြိုင်ဘက်ကလည်း ခါတိုင်းကစားတာထက် ပိုကောင်းအောင် ကစားနိုင်ခဲ့တယ်။
I should have got the job, but it wasn't my day. I went to the wrong address first of all. Then one of the interviewers obviously thought that I was too young, and one of them asked some very strange questions which I just couldn't answer.
ဒီအလုပ်ကို ငါရခဲ့သင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီနေ့က ပြဿဒါးပဲ။ စစချင်းငါ လိပ်စာမှားရောက်သွားတယ်။ ပြီးတော့ လူတွေ့စစ်ဆေးတဲ့အထဲက တစ်ယောက်က ငါ့ကို ငယ်လွန်းတယ်လို့ထင်နေတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်ကပဲ ငါ့ကို အရမ်းထူးဆန်းတဲ့ မေးခွန်းတွေမေးတယ်။ အဲ့ဒါတွေကိုလည်းမဖြေလိုက်နိုင်ဘူး။
The expression often takes the form of it just wasn't my day.
ထိုဖော်ပြမှုကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် အဲ့ဒီနေ့ကတကယ့်ပြဿဒါးပဲ (it just wasn't my day) ဟုဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
You could have fooled me! (မင်းပြောလို့သာယုံရမယ်)
You use you could have fooled me!to show that you do not believe what someone has told you:
မင်းပြောလို့သာယုံရမယ် (you could have fooled me)ကို တစ်စုံတစ်ဦး၏ပြောစကားကို မယုံကြည်ကြောင်း ပြသလိုသည့်အခါတွင်သုံးသည်။
'I've been studying hard for the exams, Dad.'
ကျွန်တော် စာမေးပွဲအတွက် အပြင်းအထန်စာကြိုးစားနေတယ် အဖေ။
'You could have fooled me! You've been out with your friends every evening this week.'
မင်းပြောလို့သာယုံရမယ်။ ဒီတစ်ပါတ်လုံးညနေတိုင်း မင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်ပဲထွက်နေတာ။
'I think Jim loved Sara very much.'
Jim က Sara ကို အရမ်းချစ်တယ်ထင်တယ်။
'You could have fooled me! He was going out with Jane while he was engaged to Sara.
'မင်းပြောလို့သာယုံရမယ်။ သူက Sara နဲ့စေစပ်ထားတုန်း Jane နဲ့လည်းတွဲနေတာပဲ။
You can read other lessons posted by me here.
Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Permalink Reply by 14jhfqdzxaoyh on December 22, 2011 at 12:47
Permalink Reply by Ratan Biswas on December 22, 2011 at 14:00
Permalink Reply by thuzarlinn on December 22, 2011 at 18:45
Permalink Reply by eainmak on December 23, 2011 at 9:30
Permalink Reply by Thuzar Nwe on December 23, 2011 at 10:37
Permalink Reply by htarsusukyawshein on December 23, 2011 at 11:15
Permalink Reply by WarKhaung on December 23, 2011 at 14:45
Permalink Reply by 046b0g3c9mi4g on December 23, 2011 at 22:48
You Could have fooled me! :P
Permalink Reply by g.star on December 24, 2011 at 9:33
ခင်ဗျာ ဘလော့တွေကနေ အများကြီးလေ့လာ ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျာ အဲဒါတွေအတွက် ကျေးဇူးဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းနဲ့ မလုံေ လာက်တော့မှန်း သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါထက်ပိုပြီးတော့လည်း ပြောစရာ မရှိတော့ဘူး....ကျေးဇူးပါ....
Permalink Reply by 1mfrb4xzvdiau on December 25, 2011 at 18:40
Permalink Reply by welwel on December 26, 2011 at 10:55
i really like this. it is really beneficial to me. i hope more
Permalink Reply by Mg Kyar Nyo on December 26, 2011 at 20:12